“एउटाले मानसिक सन्तुष्टि दिन्छ भने अर्कोले भौतिक” -ब्याबसायी एबं साहित्यकार घनश्याम राजकर्णिकार – DerbyKhabar
घनश्याम राजकर्णिकारको पिता स्व. कृष्णबहादुर राजकर्णिकारले निकै वर्ष अघि सुरु गरेको व्यवसाय हाल सम्म पनि संचालनमा छ । कृष्णबहादुर यस संसारमा नरहे पनि तपाईं हाम्रो घर अफिसमा कृष्ण पाउरोटी स्वास्थ्य र सरल खाजाको रुपमा प्रयोग भैरहेकै छ ।
आश्विन ६ ,काठमाडौँ ।। घनश्याम राजकर्णिकारको जन्म काठमान्दौं कमलपोखरीमा भएको हो । उहाँले वि.स .२०२४ मा त्रिभुवन बिश्वबिध्यालय बाट अर्थशात्रमा एम.ए.गर्नुभएको छ । उहाँले विक्रम सम्बत २०२९ सालमा जर्मनीमा खाद्य पदार्थ संबन्धि औधोगिक व्यवस्थापन विषयमा उच्च प्रशिक्षण प्राप्त गर्नु भएको थियो । सोहि साल उहाँले जर्मनीकै गोथाथे इन्स्टिच्युट बाट जर्मन भाषामा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो|उहाँको पेशा व्यवसाय उद्धोग हो र उहाँ कृष्ण पाउरोटी भण्डार प्रा.लि का अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध संचालक पनि हुनुहुन्छ ।
कृष्ण पाउरोटी को नाम सुनेपछि सबैलाई थाहा भैहाल्छ कि यो नेपालकै पहिलो पाउरोटी भण्डारको उत्पादन हो । यसको स्टोरी थाहा नपाएका पनि कमै होलान् । घनश्याम राजकर्णिकारको पिता स्व. कृष्णबहादुर राजकर्णिकारले निकै वर्ष अघि सुरु गरेको व्यवसाय हाल सम्म पनि संचालनमा छ । कृष्णबहादुर यस संसारमा नरहे पनि तपाईं हाम्रो घर अफिसमा कृष्ण पाउरोटी स्वास्थ्य र सरल खाजाको रुपमा प्रयोग भैरहेकै छ ।
पेशागत व्यवसायी घनश्याम राजकर्णिकारले आफ्नै लगन र मेहनतले साहित्य लेखन क्षेत्रमा आफ्नो छुटै परिचय बनाइ सक्नु भएको छ । व्यवसाय पछी उहाँको अर्को सबल पक्ष साहित्य हो । नेपाली साहित्यमा उहाँ विशेषगरी यात्रा साहित्यकार ( नियात्राकार ) का रुपमा चिनिनुहुन्छ । वरिष्ठ नियात्रा कारका रुपमा स्थापित राजकर्णिकार हाल विभिन्न थुपरै संघ संस्थामा आबद्द रहेका छन् र डेढ दर्जन भन्दा बढी सम्मान तथा अवार्ड समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । उमेरले ७५ वर्ष पुगिसक्नु भएका कर्णिकारसंग डर्बीले गरेको कुराकानी –
सम्बाददाता – आफुलाई कसरि चिनाउंदा यहाँलाई खुशी लाग्छ ? चर्चित लेखक वा एक सफल व्यबसायी ?
घनश्याम राजकर्णिकार – हेर्नुस , म लेखक र व्यवसायी दुवै हुँ ।एउटाले मानसिक सन्तुष्टि दिन्छ भने अर्कोले भौतिक | तैपनि यहाँले लेखक वा व्यवसायी मध्ये जुनसुकै एउटाले परिचय दिनुभय पनि मलाई स्वीकार्य छ |तर धेरैले मलाई साहित्यकार भनेर चिन्दछन् ।
सम्बाददाता – लेखनमा नियात्रा बिषेस रचनामा मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ ,यसको कारण जान्न सकिन्छ ?
घनश्याम राजकर्णिकार – पहिले मा कथा एकांगी ,कविता,नियात्रा , संस्मरण , आर्थिक लेखहरु सबै लेख्ने गर्थें | पछी जब मेरापाठकहरुले मेरो नियात्राहरु मनपराउन थाले त्यसपछि अर्थात् वि. स . २०३६ ।०३७ सालदेखि नियात्रा लेखनमा केन्द्रित हुन थालें ।अहिले म मुख्य गरेर नियात्रा, सस्मरण निबन्धमा केन्द्रित छु ।
सम्बाददाता – अहिलेसम्म यहाँले लेख्नुभएको पुस्तकहरुमा नियात्रा को पुस्तक कति छन् र अन्य के कति छन् त?
घनश्याम राजकर्णिकार – मेरा १० ओटा पुस्तकहरु मध्ये ४ ओटा नियात्रा छन्
जसमा ”विदेशको यात्रा स्वदेशको सम्झना”( वि.स. २०३७ ) , ”देश प्रदेशको भ्रमण” ( वि.स. २०४३ ), ”बौद्ध तीर्थयात्रा -नालन्दादेखी लुम्बिनी सम्म ” ( वि.स. २०६० ),र चौथो ”यात्रा अमेरिकाको माया नेपालको ” ( वि.स. २०६९ )
सम्बाददाता – अनि अन्य प्रकाशित पुस्तकहरुमा ?
घनश्याम राजकर्णिकार – अन्य थुपरै छन् , ”केहि चिन्तन केहि मन्थन ”, ”सम्झनाको लहरमा लहरिन्दै जाँदा ”, ”पबित्र सम्झना आमाको ” , ”गजराज राजकर्णिकारको बंशाबली ” यो चाई अनुसन्धानात्मक हो | अनि ” ”अनुभव र अनुभूतिका घनश्याम राजकर्णिकार ” र अर्को चै बुद्ध ज्योतिका केहि ररिम ” भन्ने निबन्ध छन् ।
सम्बाददाता – अहिलेसम्म आफैं पुस्तक प्रकाशनको खर्च व्यहोर्नु भएको छ कि कतैबाट सहयोग पनि प्राप्त छ ?
घनश्याम राजकर्णिकार – पहिले पहिले म आफैं मेरा पुस्तकहरु प्रकाशित गर्थें । पछी प्रकाशकहरुले छाप्न थाले। हालसम्म साझा प्रकाशनले दुई ओटा रत्न पुस्तक भण्डारले दुई ओटा र डिकुरा पब्लिकेशनले दुई ओटा गरि जम्मा छ ओटा पुस्तकहरु स्तरीय प्रकाशकहरुले प्रकाशन गरिदिएका छन् ।
सम्बाददाता – नियात्रा नै लेख्न यहाँलाई प्रेरणा कहाँ बाट मिल्यो ?
घनश्याम राजकर्णिकार- देश विदेशतिर यात्रा गर्दा त्यहाँ आफुले देखे भोगेका अनुभब र अनुभूति आफैमा मात्र सिमित राख्न मनले मानेन ,तिनलाई लिपिबद्ध गरेर नेपाली पाठकलाई कोसेलीको रुपमा दिन चाहें । त्यसैले खुरुखुरु नियात्राहरु लेख्दै गरें र प्रकाशन पनि गर्दै गरें ।
सम्बाददाता – तपाईका रचनाहरु अन्य पत्रपत्रिका वा संचार माध्यममा प्रकाशित भएका छन् ?
घनश्याम राजकर्णिकार- पाठकहरुले मलाई चिनेकै संचार माध्यम बाट हुन् । मेरो धेरै धेरै रचना हरु विभिन्न दैनिक ,साप्ताहिक , मासिक , पाक्षिक पत्रिकाहरुमा प्रकाशित छन् । तिनीहरुलाई गनेर साध्य छैन ।
सम्बाददाता – साहित्यकलामा लागेर यहाँले के प्राप्त गर्नु भयो जस्तो लाग्छ ?
घनश्याम राजकर्णिकार- साहित्य भनेको रास्ट्रको गहना हो । रास्ट्रको गहनालाई अभिवृद्धि गर्न पाउँदा मलाई अपरिमेय खुशी ,सन्तुष्टि र गर्व लाग्ने गर्छ । मैले हालसम्म २१ ओटा बिभिन्न थरिका सम्मान पुरस्कार, कदर पत्र पाएको छु । जसमा -रत्नश्री सुवर्ण पदक,सयपत्री राष्ट्रिय सम्मान ,एकीकृत गौरब सम्मान , राष्ट्रिय नागरिक सम्मान , नन्दी बिद्यार्थी कल्याण कोष सम्मान , उपत्यका बालकविता प्रतियोगिता सम्मान ,नागरिक समाज सम्मान ,राज कर्णिकार समाज हना-पौ ,बुकफिल्ड इन्टर्नेशनल कदर पत्र ,दिप जनमत सम्मान ,अन्तरास्ट्रिय सान अवार्ड ,लिट्रेचर, महाकवि देवकोटा सताब्दी सम्मान , दायित्व बांग्मय सम्मान ,धर्म विजय पदनम सम्मान , भानुभक्त द्विसताब्दी पुरस्कार , कबि देवकोटा नगद सम्मान ,जात्रा ब्यबस्थापन सम्मान ,प्रहरी दैमासिक सम्मान ,समी साहित्य साधना नगद सम्मान र बैजन्ति स्रष्टा सम्मान इत्यादि प्राप्त गरेको छु ।
सम्बाददाता – अब नयाँ रचना कुन हुनेछ तपाईको , पाठकका लागि ?
घनश्याम राजकर्णिकार- हाल म मेरो पाचौं नियात्रा ”यात्राको पाइलामा हिउँ फुलको देश ” नामक पुस्तक लेख्दैछु । यो अहिले अन्तिम चरणमा छ । सायद ५\_६ महिनामा यसले आफ्नो घुम्टो उघार्छ होला ।
सम्बाददाता – यसको लागि अग्रिम शुभकामना यहाँलाई ,नेपालीको महान चाड दशैँ पनि आइसक्यो ,कसरि मनाउदै हुनुहुन्छ यो चाड ?
घनश्याम राजकर्णिकार- लेखपढमा रुची राख्ने हुँदा दशैको बिदामा म बिशेष गरि लेखपढ मै केन्द्रित रहनेछु , यसैमा म आनन्दित हुनेछु ।
सम्बाददाता – हस् ,हामीलाई यहाँको महत्वपूर्ण समय दिएर यहाँ सम्म आइदिनु भयो ,यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यबाद !
घनश्याम राजकर्णिकार- हस्, पविता जि यहालाई पनि मेरो हृदय देखि धन्यबाद छ । धन्यबाद !
दशैं को शुभकामना दिदै घनश्याम राजकर्णिकार